Kulan ay macaamiisha la yeesheen oo ka mid ah dukaannadayada, qof shaqaale ah ayaa iiga sheekeeyay istiraatiijiyadeeda: "Waa inaad joogtaa goobta saxda ah waqtiga habboon." Waxaan moodayay in istiraatiijiyadani dhab ahaantii run tahay. Si kastaba ha noqotee, waxa oo dhan ayaa ka fudud in la sheego intii la qaban lahaa. Waxaan joogay meesha saxda ah waqtiyo sax ah dhowr jeer - tusaale ahaan, markii aan u socday socod xeebeedka Australia oo aan la kulmay koox dad badan oo arkay xayawaanno kaluumaysi ah. Dhowr maalmood ka hor waxaan awood u yeeshay inaan daawado shimbir naadir ah, oo ah qosolka Hans. Miyaad jeceshahay inaad had iyo jeer joogtid meesha saxda ah waqtiga habboon? Mararka qaarkood waxay ku dhacdaa si fursad, waqtiyo kalena waa jawaabta salaadda. Waa wax aannaan qorsheyn karin ama aan xakamayn karin.
Haddii aan ku jirno meesha saxda ah waqtiga habboon, dadka qaar waxay ugu yeelaan xiddig xiddig halka qaar kalena ay ugu yeeraan nasiib. Masiixiyiintu waxay jecel yihiin inay ugu yeeraan xaalad noocaas ah "faragelinta Ilaah ee nolosheena" maxaa yeelay waxay rumeysan yihiin in Ilaah uu ku lug lahaa xaaladdan. Dhexgalka Eebbe wuxuu noqon karaa xaalad kasta oo umuuqata inuu Ilaahay isu keenay, ha ahaato dadka ama wanaag. "Laakiin waxaan ognahay in kuwa Ilaah jecel inay wax walba u adeegaan wax wanaagsan, kuwa loogu yeedhay go'aankiisa kadib" (Rooma 8,28). Aayaddan oo aad loo yaqaan oo mararka qaar si khaldan loo fahmo macnaheedu maahan in wax kasta oo ku dhaca nolosheenna ay tahay mid hoggaamisa oo Ilaah xukuma. Si kastaba ha noqotee, wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan raadino sida ugu fiican xitaa waqtiyada adag iyo xaaladaha xun.
Markuu Ciise ku dhintay iskutallaabta dusheeda, xertiisii ​​waxay sidoo kale la yaabeen sida khibraddan argagaxa leh ay u soo saari doonto wax wanaagsan. Qaar xertiisii ​​ka mid ah ayaa ku soo noqday noloshoodii hore oo waxay u shaqeeyeen sidii kalluumeysato maxaa yeelay waxay is casileen markii ay gaareen go'aan ah in dhimashadii iskutallaabta lagu qodbay ay ka dhigan tahay dhammaadka Ciise iyo hawshiisa. Intii lagu gudajiray saddexdaas maalmood intii u dhaxeysay dhimashadii iskutallaabta iyo sarakicidda, rajada oo dhan waxay umuuqdeen kuwo lumay. Laakiin sida xertii markii dambe bartay iyo sida aan ognahay maanta, waxba kuma lumin iskutallaabta, laakiin wax walba waa lagu guuleystay. Ciise, dhimashada iskutallaabta ma ahayn dhamaadka, laakiin waa bilowga. Ilaah dabcan bilowgiisa wuu qorsheeyey in wax wanaagsan ay ka soo baxaan xaaladdan muuqata oo aan macquul ahayn. Waxay ahayd wax ka badan lama filaan ama faragelinta Ilaah, waxay ahayd qorshaha Ilaah bilowgii. Taariikhda aadanaha oo dhami waxay horseedeen heerkan loo jeedinayo. Waa qodobka udub dhexaadka u ah qorshaha weyn ee Ilaah ee jacaylka iyo madax furashada.
Sida dumarka iyo xertii si bayaan ah rajo beelka uugu dhiibeen sedexdaan maalmood ee mugdiga ah, waxaan mararka qaar u qulqulayaan nolosheenna ama nolosha dadka kale maxaa yeelay rajo maleh inuu muuqdo. Laakiin Ilaahay wuu qallajin doonaa ilmo kasta oo jeexan oo wuxuu ina siinayaa dhammaadka wanaagsan ee aan rajeyneyno. Waxaas oo dhami waxay dhacaan oo keliya maxaa yeelay Ciise wuxuu ku sugnaa meeshii saxda ahayd wakhtigii ku habboonaa.